Thenga i-Altrenogest powder (850-52-2) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / Altrenogest powder
SKU: 850-52-2. Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Altrenogest powder (850-52-2), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Altrenogest powder ihlala ilawulwa kwii-stallions ezincinci kwishishini elilinganayo njengento yokusetyenziswa kwelebula ekukhuseleni ukuziphatha ngokwesini / ngesondo. Kule sifundo, ii-2-yr-Old Quarter Horse stallions ekuqeqesheni kwangaphambili ziqhutywe i-altrenogest (i-0.044 mg / kg ye-BW imihla ngemihla) ukucacisa imiphumo yokuziphatha ngokwesondo / kwenzondelelo, iiparameter parameters kunye neprofayili ye-hormone ye-steroid.
Altrenogest powder ividiyo
Altrenogest powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Altrenogest powder
Melt Point: 116 ku-120 ° C
Umjikelezo we-Altrenogest powder
I-BRON (BR): I-Altrenogest powder
IGAMA JIKELELE (S): Ukuhlaziya, iMatrix, Gcina i powder, I-Matrixpowder
Ukusetyenziswa kwePowderogest powder
I-Altrenogest powder, progestagen, i-17α-allyl is derivative ye-anbolic agent e-trenbolone ehambelana ne-hormone yesini, i-testosterone. I-Altrenogest powder ibonakala iyasetyenziswa ngokubanzi, kunye nexesha elide, kumashishini ekukhuphisana kwamahashe. Oku kwenzeka kwizame zokuphucula ukunyuswa kobubele, okwenza kube lula ngakumbi kwaye kulungele uqeqesho nokhuphiswano. Nangona kunjalo, ukulawula ixesha elide akuhambisani neziphakamiso zabakhiqizi. Kwamazwe amaninzi, isilwanyana sibhalise kuphela ukulawulwa komlomo kuma-mares kwii-10 iintsuku ngenjongo yokuqulunqwa kwe-ostrus ye-ovulrus kwinqanaba lokutshintshwa kwexesha le-oestrus. I-Altrenogest ipowder eluhlaza igxotha i-oestrus yokuziphatha kwi-mares ngaphakathi kwe-2-3 iintsuku zokuqala kokulawula. Imiphumo yolawulo lwexesha elide kuma-mares e-Altrenogest powder ayinakwaziwa, ingakumbi ngokubhekiselele kulawo asetyenziswe ukhuphiswano. Ukongezelela, akucaci ukuba le nkunkuma inayo naybolic okanye imiphumo ebalulekileyo yokuziphatha kumahashe.
Ngoko ke isifundo senzelwe ukunika uvavanyo lokuqala lolawulo olude lwe-Altrenogest powder eluhlaza kwiimari ezidlulileyo ngokwemigangatho yolawulo lwentlalo, ubunzima bomzimba kunye nemeko yomzimba (BCS). Izilwanyana ezilishumi elinambini zohlobo oluxubekileyo (i-Thoroughbred ne-Standardbred) zifunyenwe kumthengisi wehashe wendawo. Izilwanyana zagcinwa edlelweni njengeqela elinye kwiiveki ezingama-20. Ukufunyanwa kokulandela, zonke ii-mares zenziwa iinkqubo zonyango zexesha eliqhelekileyo, kubandakanywa ukuguqulwa komzimba, i-prophylaxis yamazinyo, ukunakekelwa kwamazinyo kunye nokugonya. Amatye avunyelwe ukuba angenelele kwimeko entsha kwimizuzu emine ngexesha apho bazinzile njengeqela loluntu, kwaye bajwayele ukwenza iinkqubo zokulawulwa kwenkqubo, umzekelo, ukubanjwa, ukulingwa, ukubekwa, ukulawulwa kwamachiza omlomo ngesirinji. Kulo lonke ixesha lokufunda olongezelelweyo i-lucerne hay londliwa. Ama-mares ayelinganiswa kwaye amanqaku emeko abhalwa kabini ngeveki.
Iyiphi imilinganiselo ye-Altrenogest powder
Ukulawulwa komlomo we-Altrenogest powder yokunciphisa i-oestrus kumncintiswano wamahashe kukholelwa ukuba ixhaphake kwezinye iinqununu ze-equestrian, kwaye iyakwazi ukuqhutywa ngokuqhubekayo kwiinyanga eziliqela ngexesha lokhuphiswano. Ukuphonononga ukuba i-Altrenogest ipowder eluhlaza ikhona i-anabolic okanye ezinye izinto ezinokuthi zenze ihashe inzuzo engalunganga, sihlolisise umphumo we-oral Altrenogest powder (0.044 mg / kg), inikwe imihla ngemihla iiveki ezisibhozo, kwintlalo ulawulo lwabasebenzi, uhlahlo lwabiwo-mali, umzimba omzimba kunye nomgangatho womzimba we-12 i-mares sedentary mares. Kwagqitywa ukuba ulawulo olude lomlomo lwe-Altrenogest ipowder eluhlaza kwinqanaba le-dose eliphakanyisiweyo kuma-dentaryary mares alizange libe nomthelela ekulawuleni ama-hierarchies, ubunzima bomzimba okanye amanqaku emeko.
Indlela i-Altrenogest powder isebenza ngayo
Kwamava ethu, i-Altrenogest powder ayizange ihlale ikwazi ukulawula ukuqikelela kwimijikelezo ye-mare. Ngoko ke, sihlolisise ii-12 mares eziye zaphathwa nge-Altrenogest powder eluhlaza ukuchonga izizathu zokungaphumeleli kokulawula umjikelezo wesi-estrous. Amayeza aphethwe i-Altrenogest powder kwi-15 kwii-20 iintsuku kwaye ahlolisiswa ukuphuhliswa kwentambo, i-ovulation, kunye ne-corpus luteum ngexesha lokunyanga. Ngokusetyenziswa kwe-real-time ultrasonography kunye ne-radioimmunoassay yeprogesterone, sagqiba ekubeni i-Altrenogest ipowder eluhlaza yayingakwazi ukunqanda ukukhula kobugqwetha kwi-precovulatory size kwezinye iilora, ezikhokelela ekugqibeleni ngexesha lokonyango okanye ngaphambili kunokuba kulindelwe emva kokuphela kokonyango. Ukongezelela, i-Altrenogest powder ayibonakali ukufutshane nemigangatho yokuphila ye-lutea eyenziwe ngexesha lotyando; kuma-4 mares, oku kubangele ukuphikelela kwe-corpora lutea emva kokuphela kwexesha le-15 yonyango. Iziphumo zokugqibela zenze ukuba sikhankanywe ukuba ukuba i-luteolytic dose ye-prostaglandin yanikezelwa ekupheleni kweyonyango e-Altrenogest yonyango olumhlaza, bekuya kuba nokuphuculwa kolawulo phezu komjikelezo wesisu. Iziphumo zophando lwethu ziqinisekisile ukubonakala kwethu kweklinikhi ukuba i-Altrenogest powder inganelisekisa ukulawula umjikelezo we-equine esrous phantsi kweemeko ezithile, kodwa akufanele isetyenziswe xa kulawulo oluchanekileyo malunga nokuvuthwa kuyadingeka.
Iinzuzo ze-Altrenogest powder
Altrenogest umgubo (ALT), i Progestogen zokwenziwa, kunye gonadotropins zithe zadala esihlasela i-Swine Leukocyte iantigens (SLA) nehagu esizalwa efinyeziweyo ukuba ayidli kubekho ireyithi ovulation kunye nobukhulu inkunkuma encinane. E Study 1, 15 abadala iihagu angamabhinqa nokuba ulawulo (Group I, n = 5), wondla 15 MG ALT / ngosuku iintsuku 14 (Group II, n = 5), okanye ALT eyondliwe emkhumbini kunye ziphathwe serum gonadotropin imazi yehashe elikhulelweyo (1200 IU, im) kunye ne-chorionic gonadotropin (500 IU, im) 24 h kunye ne- 104 h, ngokulandelanayo, emva kokurhoxiswa kwe-ALT (iqela III, n = 5). E Study 2, amaqela tbree iihagu (I, n = 24; II, n = 11; III, n = 11) baphathwa ngokufanayo kwabo kwiSifundo 1 ngaphandle kokuba iihagu kwiSifundo 2 (Amaqela II III) ziye zalala. Ii-ovane zazo zonke izilwanyana kwizifundo zombini zihlolwe i-laparoscopically okanye nge-laparotomy 5-8 iintsuku emva kwe-estrus ukuvavanya umsebenzi we-ovari. I-uteri yezilwanyana zeQela II ne-III kwiSifundo se-2 zahluthwa nge-tissue medium medium, eye yavandlakanywa ukuba ubukho kunye nomgangatho wemibungu.
Akukho ngulube yabonisa indlela yokuziphatha ngexesha lolawulo lwe-ALT. Azikho zonke izilwanyana ezibonisa ukuziphatha okuqhelekileyo emva kokurhoxiswa kwe-ALT. Xa idatha yezifundo zombini zihlanganisiwe, i-2 ye-16 (12.5%) yeqela II kunye ne-6 ye-16 (37.5%) yeeNgqayi ze-Group III ayizange ibonise ukuma kwe-esrus. Ukulandela i-ALT nge-drawed, amabhinqa kumaqela II kunye no-III abuyela e-estrus kwi-5.6 ± 0.3 kunye ne-5.8 ± 0.3 imihla, ngokulandelanayo (p> 0.05). inombolo Corpora lutea yanyuswa (p <0.05) ngu unyango ALT yedwa (11.4 ± 1.8) kuthelekiswa zolawulo (6.9 ± 1.3) yaye yanyuswa (p <0.01) phambili ukusetyenziswa gonadotropins angaphandle (22.6 ± 1.9). I-morula ebonakalayo kunye ne-blastocyst yafunyanwa kwi-14 yama-22 amabhinqa. Nangona kunjalo, i-cysts ifunyenwe kwi-endometrium ye-5 ye-9 kunye ne-9 yee-pigs ze-10 kumaqela II no-III, ngokulandelanayo. Ubungakanani beli meko, ekwahlulelwa njenge-cystic endometrial hyperplasia (CEH), eyahlukileyo phakathi kwamabhinqa, kwaye ukuvela kwayo kubonakala kuxhomekeke kwiminyaka yobudala. Ukuvavanya okuqhubekayo kwe-SLA engaxhatshazwayo yenkomo yeehagu zengqolowa ibonisa ukuba i-CEH ayihambelani ne-ALT ye-orgonadotropin unyango.
Olu pho nonongo lubonisa ukuba unyango lwe-ALT kuphela lusebenza ngokufanelekileyo ukuvumelanisa i-estrus kwaye lunempembelelo enempembelelo kwimpendulo ye-ovulatory kwi-pig ye-pig e-SLA. Ukusetyenziswa okungezelelweyo kwegonadotropin kuvuselela iimpendulo ezongezelelweyo ze-ovulatory; Nangona kunjalo, iziganeko kunye nobukhulu beendlela zokuziphatha eziphantsi kuncitshiswa. Ukubuyiselwa kwama-embrologically e-embrologically ebonisa ukuba ukuchumisa akunakuchaphazeleka. Nangona kunjalo, ubukhulu beettert ubukhulu bexesha lungadibaniswa ne-cystic degratic ye-endometrium ye-uterine, enokubangela ukunyuka kwama-embryonic kunye / okanye izinga elincinci lokufakelwa.
I-Altrenogest i-powder yohlaza
Uhlalutyo lwe-Altrenogest powder
Olu pho nonongo luhlolisise imiphumo echukumisayo yokuziphatha ngokwesondo kunye nobudlova kunye nemigqaliselo yemigqomo kwiintoloni ezincinane ngenxa yokulawulwa kwimihla ngemihla ye-Altrenogest powder kwithuba leeveki ezisibhozo. Ezi parameters zaphinda zihlolwe emva kwexesha lokubuyisela kweeveki ezisibhozo (imini 111). Kwamaxesha amathathu kwisifundo (iintsuku-9, 60 kunye ne-111), imilinganiselo ibhaliwe kubandakanywa ubunzima, umlinganiselo wesigxina kunye nomgangatho womzimba wee-stallions. Amagqabantshintshi kumaqela alamabini amayeza awazange ahluke ngokomlinganiselo, umgangatho womzimba okanye imilinganiselo ye-metacarpal kulo lonke uphando. Nangona kunjalo, iinqununu ezithengayo ziye zaphela (P <.05) kwiintloni zonyango ezisezantsi kwaye zihlala zisezantsi (P <.05) emva kokugqitywa kweeveki ezisibhozo ze-Altrenogest powder (raw 16). Imilinganiselo yecala elixhamlayo lihlukile (P <.05) phakathi kwamaqela okulawula kunye nokwelashwa kwiveki ye16. Ukunciphisa ukuqikelelwa kwemveliso yesilisa (DSP) kwafunyaniswa kwiinqweloni kwiqela lonyango kwiiveki ezisibhozo (P <.01) kunye nee16 iiveki (P <.05). Oku kuncipha kwi-DSP eqikelelweyo kwakunokwenzeka ngokuthe ngqamana nokuncipha kwenkqutyana. ukungaqheleki Spermatozoal anda kakhulu ngaphakathi zamahashe unyango, abanala makhwiniba intloko (P <.009) kunye ezingaqhelekanga nomsila (P <.001) ukwandisa phakathi ixesha yokuqokelela yaphambi kwetyala kunye nexesha nokuqokelelwa seeveki ezisibhozo.
Amagqabha afunyenwe ngokuziphatha ngokwesondo kunye nobudlova usebenzisa uvavanyo lokuhlaziya oluchaziweyo kathathu ngexesha lokufunda (iintsuku-12, 57 kunye ne-111). Indlela yokuziphatha yayivandlakanywe ngokutyhila i-stallion kwi-mare ephatheka ngesandla e-Estrus ngexesha lokubheka imizuzu emithathu. Uhlobo lwe-Flehmen kunye nobude buyehla (P <.05) phakathi kwama-stallions aphathwa nge-Altrenogest kwixesha lokuqokelela iiveki ezisibhozo. Ubungakanani bokulahla kwepenisi bekulindeleke ukunciphisa (P <.08) ngeveki yesibhozo kwii-stallions eziphathwayo. Ubude bexesha (P <.05) kunye nexesha (P <.005) zancitshiswa kwiqela eliphathwayo kwiiveki ezisibhozo.
Ezi nkcukacha zibonisa ukuba unyango lwama-stallions amancinci kunye ne-Altrenogest powder eluhlaza iiveki ezisibhozo liye laphawula imiphumo yokuziphatha ngokwesondo kunye nezobudlova kunye nokuveliswa kwesidoda. Amaninzi ala maperamitha awazange abuyele kwiimilinganiselo zangaphambili zesilingo emva kweiveki ezisibhozo emva kokupheliswa kwonyango. Uphando olongezelelweyo lufunekayo ukuphanda amandla amancinci amancinci ukufumana ixesha elidlulileyo kwimiphumo emibi ye-Altrenogest powder management njengoko kuboniswe ngokunciphisa i-libido, imilinganiselo ye-scrotal kunye nokuveliswa kwemveliso yentsuku ebhalwe kulolu cwaningo.
Indlela yokuthenga i-Altrenogest powder evela kwi-AASraw
I-Altrenogest ipowder eluhlaza Iiresiphi
I-Drospirenone powder (67392-87-4)